Nigeria: 153 qof oo ku geeriyoodey shil diyaaradeed - Horseed Media
Nigeria: 153 qof oo ku geeriyoodey shil diyaaradeed June 4, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogle153-qof ayaa ku geeriyoodey shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada Lagos ee koonfurta dalka Nigeria.
Diyaaradda shilka gashay oo ay leedahay shirkadda duulimaadyada ee Dana waxay kasoo kacday magaalada caasimadda ah ee Abuja.
Diyaaradda oo khadka ka baxday waxyar kadib markii ay garoonka Lagos soo caga dhigan lahayd ayaa ku dul bur burtay xaafad isku raran ah oo ay dad badani ku dhaqan yihiin.
Dadka shilkan ku geeriyoodey waxaa ku jira shakhsiyaad magac dheer dalkaas ku lahaa iyo mas’uuliyiin dowladda ka tirsan oo uu kamid yahay sarkaal sare oo ka tirsanaa hay’ada shidaalka ee Nigeria.
Madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan oo isaguna shilkaas diyaaradeed kadib TV-ga qaranka ee dalkaas ka hadlay ayaa iclaamiyey 3-beri oo baroor diiq ah kuwaas oo lagu xusayo dadkii shilkaas diyaaradeed ku dhintay.
Diyaaradda shilka gashay oo ay dhinteen dhamaan dadkii rikaabka ahaa ee la socdey waxaa la sameeyey sanadkii 1990-kii waxaana bishii hore lagu arkay cillad xilli ay isku dayeysey inay soo degto.
Mas’uuliyiinta shirkadda Dana iyo saraakiisha Booliska ayaa sheegay in aan si dhab ah loo ogeyn sababta shilkan keentay haseyeeshee waxaa loo badinayaa inuu yahay mid xiriir la laleh ciladii dhowaanta lasoo deristey.
Shilkan ayaa dhacay 24-saac kadib markii diyaarad nooca rikaabka qaada ah oo dalka Nigeria laga leeyahay ay ku burburtay meel u dhow garoonka magaalada Accra ee dalka Chana.